Ndepụta zuru ezu nke njehie na nsogbu PSD na Outlook PST
Home ngwaahịa DataNumen Outlook Repair Ndepụta nke Njehie
Njehie na Nsogbu nke Outlook
Ndepụta nke Njehie na Nsogbu na Outlook PST faịlụ
Mgbe ị jiri Microsoft Outlook iji mepee emerụ onwe nchekwa (PST) faịlụ, ị ga-ahụ ozi njehie dị iche iche, nke nwere ike ịbụ ntakịrị ihe mgbagwoju anya nye gị. Yabụ, lee, anyị ga-anwa ịdepụta njehie niile enwere ike, wee nwee ike gụpụta ha kwa ugboro. Maka njehie ọ bụla, anyị ga-akọwa mgbaàmà ya, kọwaa ihe kpatara ya ma nye faịlụ nlele yana faịlụ edozi site na ngwaọrụ mgbake nke Outlook. DataNumen Outlook Repair, ka i nwee ike ịghọta ha nke ọma. N'okpuru anyị ga-eji 'filename.pst' gosipụta aha faịlụ Outlook PST rụrụ arụ.
Faịlụ xxxx.pst abụghị faịlụ folda nkeonwe.
Achọpụtala njehie na faịlụ xxxx.pst. Kwụsị Outlook na ngwa niile enyere ozi, wee jiri ihe nrụzi Igbe mbata (Scanpst.exe) chọpụta ma mezie njehie na faịlụ ahụ. Maka ozi ọzọ banyere igbe mbata Igbe mbata, lee Enyemaka.
Microsoft Outlook ezutewo nsogbu ma chọọ imechi. Anyị nwute maka nsogbu ahụ.
Ahụghị xxxx.pst faịlụ.
Enweghi ike igosi folda ahụ. Faịlụ xxxx.pst enweghị ike inweta.
xxxx.pst enweghị ike inweta - 0x80040116.
Enweghi ike ịnweta faịlụ xxxx.pst. Njehie data. Nyochaa mgbapụta nke Cyclic.
Enweghi ike ịgbasa folda ahụ. Enweghi ike imeghe ntọala folda. Enweghị ike imeghe faịlụ xxxx.pst.
Enweghi ike imegharị ihe ndị ahụ. Enweghi ike imeghari ihe. Emegharịrị ya ma ọ bụ ehichapụ ya, ma ọ bụ ọghara ịnweta.
Enweghi ike imegharị ihe ndị ahụ. Enweghi ike ibugharịa ihe ahụ. Ebugharị na nke izizi ma ọ bụ ehichapụ ya, ma ọ bụ ekweghị ịnweta ya.
Enweghi ike imegharị ihe ndị ahụ. Enweghi ike ịrụcha ọrụ ahụ. Otu ma ọ bụ karịa oke ụkpụrụ adịghị dị irè.
Itemsfọdụ ihe enweghị ike imegharị. Ebugharịrị ma ọ bụ ehichapụ ha, ma ọ bụ ekweghị ịnweta.
Outlook PSTOST faịlụ a adịghị nwayọ ma ọ bụ anabataghị ya.
Agbanyeghị Microsoft na-enye Ngwá Ọrụ Mmezi Igbe mbata (Scanpst.exe) iji dozie nsogbu dị na faịlụ PST rụrụ arụ, ọ nweghị ike ịrụ ọrụ maka most nke ikpe. A na-enwe nsogbu mgbe niile mgbe Ngwaọrụ Mmezi Ngwaọrụ anaghị arụ ọrụ:
Igbe mbata Igbe Mbata anaghị amata faịlụ xxxx.pst…
Njehie a na-atụghị anya ya gbochiri ịnweta faịlụ a. Jiri ScanDisk iji lelee diski maka njehie, wee nwaa iji ngwaọrụ Mmezi Igbe mbata ọzọ.
Mperi emeela nke mere ka nyocha ahụ kwụsị. Enweghị mgbanwe e mere na faịlụ nyocha.
Igbe Mbata Ngwaọrụ (Scanpst.exe) na-adabere na-adịghị agwụ agwụ ma ghara ịrụzi mmezi ahụ.
PST faịlụ edozi site na Igbe Mmezi Igbe (Scanpst) bụ ihe efu ma ọ bụ na enweghị ihe ndị ahụ achọrọ.
Scanpst na-akọ "Error Fatal 80040818" mgbe ị na-achọ ịrụkwa faịlụ PST.
Scanpst na-akọ “njehie amaghi ama gbochiri ịnweta faịlụ ahụ. Njehie 0x80070570: Faịlụ ma ọ bụ ndekọ na-emerụ na-agụ ”.
Ọnwụ data mgbe ị na-eji ya Igbe Mbata Ngwaọrụ (Scanpst.exe) ịrụkwa ihe mebiri emebi PST faịlụ.
Ọzọkwa, mgbe ị na-eji Microsoft Outlook, ị nwekwara ike izute nsogbu ndị a ugboro ugboro, nke enwere ike idozi ya DataNumen Outlook Repair mfe.
Oversized PST faịlụ nsogbu (PST faịlụ nha ruru ma ọ bụ karịa njedebe 2GB).
A na-ehichapụ ozi ịntanetị Outlook na ihe ndị ọzọ n'amaghị ama.
Ichefu ma ọ bụ tufuo paswọọdụ ma ọ bụ ozi nbanye maka faịlụ PST.
Na mgbakwunye, mgbe ị na-eji ekwentị mkpanaaka gị mekọrịta data na Microsoft Outlook na desktọọpụ gị, ị nwekwara ike lost ozi ịntanetị na ndị ọzọ ihe n'ihi mmekọrịta mmekọrịta ma ọ bụ nkwarụ ngwanrọ. N'ọnọdụ dị otú a, ị nwekwara ike ojiji DataNumen Outlook Repair iji weghachite lost ihe.
Mgbe ụfọdụ, mgbe ị na-ezute nsogbu Outlook, ọ na-esiri gị ike ịchọpụta ezigbo ihe kpatara ya. N'ọnọdụ dị otú a, ị nwere ike chọpụta nsogbu ahụ site na nkwụsị ma chọpụta ihe dị njọ na Outlook gị.